Vaovao - Ny ekipantsika dia nandray anjara tamim-pahombiazana tamin'ny fampirantiana hoditra Hong Kong APLF tamin'ny taona 2019
Ny ekipantsika dia nandray anjara tamim-pahombiazana tamin'ny fampirantiana hoditra Hong Kong APLF tamin'ny taona 2019
Ny ekipanay dia nanidina nankany Hong Kong tamin'ny 12,2019 martsa, ary nanomboka fampirantiana 3 andro'APLF. Izay fampirantiana vita amin'ny hoditra, fitaovana sy kojakoja lamaody ary hatao ao amin'ny Hong Kong Convention & Exhibition Center endrika 13 ka hatramin'ny 15 martsa. Ny efitrano faharoa dia mizara roa rihana, ny gorodona fisrt dia natao ho an'ny lamaody fitaovana, toy ny hoditr'ondry, hoditr'ondry, zanak'ondry. Ny rihana faharoa dia ho an'ny Fashion Accessories. Ny orinasanay dia hita ao amin'ity efitrano fampisehoana ity. fonon-tànana hoditr'ondry manety, baoty zazakely, satroka hoditr'ondry, tapis vita amin'ny hoditr'ondry, volomparasy sy ondana volon'ondry Tibet.
Amin'ity fampirantiana ity dia nihaona tamin'ny mpanjifa mahazatra anay izahay niara-niasa nandritra ny taona maro. Niresaka malalaka momba ny firoboroboan'ny fonon-tànana hoditra sy ny ho avin'ny indostrian'ny Accessories amin'ny lamaody izahay. Japon, Korea atsimo, Aostralia, Etazonia, Kanada ary firenena hafa. Nampiseho fahalianana lehibe tamin'ny vokatra hoditr'ondrinay izy ireo.
Ny fonon-hoditr'ondry namboarinay tànana, satroka hoditr'ondry lamaody, fandrobana zanak'ondry malefaka sy mateza. Tamin'ny fotoana malalaka, nitsidika booth fampiratiana vita amin'ny hoditra izahay ary nihaona tamin'ny kojakoja vitsivitsy avy tany Etiopia, Espana ary Nouvelle-Zélande. drafitra fividianana hoditr'ondry avo lenta. Ka tsara raha mitady kojakoja vita amin'ny hoditra sy kojakoja lamaody eto.
Hatramin'ny nananganana ny orinasa tamin'ny 2002, ny ekipanay dia manohy manenjika fonon-tànana hoditr'ondry tsara sy fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry. Manidina any Hong Kong izahay, manidina any Etazonia, manidina any Italia. manangona ny fironana lamaody farany fanapahana indrindra. Opcuse, koa mba hahatakarana tsara kokoa ny filan'ny mpanjifa miovaova hatrany. amin'ny famolavolana endrika ary manaova fonon-tànana vita amin'ny hoditra ondrilahy mety. Ny fonon-tànana hoditr'ondry ihany no azonay ampiasaina amin'ny mpanjifa satisty. Arakaraky ny hahavonanao no ahitanao ny lavidavitra kokoa. Noho izany, na inona na inona fanampiana, azafady aza misalasala mampahafantatra ahy fa hanao izay vitako aho mba hanampiana. Mpanampy matihanina amin'ny fonon-koditra hoditr'ondry izahay.